Xa uValery Meladze ehlukanisa nomfazi wakhe u-Irina kwiminyaka emibini edlulileyo, abaninzi banokuqiniseka ukuba umtshato wakhe kunye no-Albina Dzhanabaeva uza kukhawuleza.
Ixesha ladlulayo, kodwa kwakungekho utshintsho ebomini womculi owazala umculi wabantwana ababini. Ukongezelela koko, isibini esithintekayo sasigweba ukubonakala kwendibano nakwiyiphi na imicimbi yehlabathi, nangona bekungaseseyimfihlo yobudlelwane babo.
Emva kokuwa konyaka odlulileyo kwaziwa ngomtshato wemfihlo kaConstantin Meladze noVera Brezhneva, kwakukho intetho kwi-intanethi umntakwabo omncinci womqambi wakwazi ukutshata no-Albina Janabaeva ngasese. Nangona kunjalo, iindaba zakutsha zisekelwe kuphela kwiingcinga. Isiqinisekiso esingalindelekanga sale nguqulo sinikwe kubathatheli ngu-Albina ngokwakhe.
Izolo uValery Meladze kunye noAlbina Dzhanabaeva babonakala ngomhla wokuzalwa kaAnita Tsoy, owayegubha kwiindawo zokudlela ezinkulu. Oku kubonakale okokuqala ngokubambisana kwihlabathi njengesiqabane. Abafaki-zithombe baphumelele ukubamba ingqungquthela yokubambisana eyayinxibe isithandwa somthandayo othandekayo. Ekuhloliseni okufutshane, kunokubonwa ukuba indandatho encinci yeklasi igqitywe phantsi kwendandatho enkulu yedayimani.
Kubonakala sengathi uValery Meladze wayesakwazi ukukhokela iparazzi emlonyeni wakhe ngomnwe, efihle umtshato wakhe kumama wabantwana bakhe.
UAnastasia Volochkova ubethwa ngumthandi omtsha
USvetlana Bondarchuk obesabisayo ababhalisile abanomfanekiso kwi-swimsuit
UZemfira kunye neflegi yaseUkraine bamangalise abo basebenzisana naye
U-Natalia Podolskaya walahlekelwa isisindo emva kokuzala
U-Yulia Vysotskaya ubeke ingxelo malunga nendodakazi kaMas
I-Potato yeBatato Ukuthengiswa nguDmitry Nagiyev, ividiyo
Indlela yokubiza intombazana ngoko wayenwabile
Iminyaka engcono kakhulu yokuzalwa komntwana
Ukudlala ngecala lomfazi otshatileyo
Iingubo zezingane ezinokwakheka kakhulu kwi-2016: izitayela zangempela kunye neziprints
I-potato casserole ngamakhowe kunye negalikhi
Izandla ezisuka kumagqabi ukuya kwi-kindergarten nasezikolweni 1 kwiklasi - iiklasi zeeklasi kunye neefoto ezithatha ngeyinyathelo kunye namavidiyo
Laxative ukulahleka kwesisindo
Ulwalamano lwentsapho ngaphandle kwesondo
Ubudlelwane ngaphandle kothando kunye neminqweno efanayo
Indlela yokujonga isitayela kwiingubo ezilula: imithetho yesi-5 ye-kazhual ikhabethe kulabo abafuna ukungenakunyaniseki!
Ikhefu "Isigodlo sesigodlo"
Iingcebiso - njani ukulungiselela umntwana esikolweni?
Indlela yokucoca iimveliso zobomi ekhaya?
Ukunyaniseka kwigama okanye izithembiso ezingenanto
Ngaba kuyayisebenzisa ukusebenzisa amavithamini angaphezulu?
Ukuxinezeleka kunye nendima yayo ebomini bomntu